छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफा समेतबाट शेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस शेयर र २२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भदौ २२ गते नै लाभांश प्रस्तावको निर्णय गरेको कम्पनीले हालसम्म साधारणसभाको मिति तय गरेको छैन । पुस मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा रू. ३९ करोड २३ लाख ५५ हजार खुद नाफा गरेको उल्लेख छ । कम्पनीले गतवर्ष पुस मसान्तसम्ममा रू. २१ करोड ५९ लाख ४३ हजार खुद नाफा गरेको थियो ।
गतवर्षको ६ महीनाको तुलनामा यस वर्ष ८१ दशमलव ६९ प्रतिशत खुद नाफा बढाउन कम्पनी सफल देखिएको छ । कम्पनीले हाल ६७ जिल्लामा १ सय ३४ शाखा कार्यालय मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै वित्तीय पहँुच नपुगेका २१ जिल्लाका अति विकट क्षेत्रमा ७८ ओटा डिजिटल प्वाइन्ट मार्फत सेवा दिँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ ।
2019-02-10 - 170 view(s) - abhiyan